13 -ka Shaqooyin Jir ee Ugu Sareeya Oo Si Fiican U Bixiya 2022
Shaqooyinka Jirka 13 ee Ugu Fiican oo Bixiya
Shaqooyinka jidhku waxay la yimaadaan walaac badan oo haddii aadan rabin waxaad u beddeli kartaa mid kasta oo ka mid ah shaqooyinka aan jirka ahayn oo si fiican u bixiya oo si habboon uga shaqeeya meel kasta oo aad joogto.
Adduunyadu waxay tagtay ganacsiyo dijitaal ah iyo dhaqameedyo iyo shirkado aan la jaanqaadi karin isbeddelka ayaa u muuqda inay fashilmaan. Goobta dhijitaalka ah ayaa ah mid aad u ballaaran oo ay ka buuxaan fursado aan dhammaad lahayn kuwaas oo qaarkood la baaray oo la hirgeliyey. Haddii aad u malaynayso in fursadaha internetka si buuxda loo baadhay, markaa waxaad u baahan tahay inaad mar kale ka fikirto maxaa yeelay xitaa caaradda si buuxda looma baarin.
Ganacsiyo badan ayaa awooday inay si buuxda u gaaraan awoodooda markay soo ifbaxday intarneedka sidoo kale fikrado cusub ayaa ka dhashay iyada oo wax ku soo kordhisay waxna ka beddeshay adduunka. Maalmahan, qaar ka mid ah shirkadaha dhaqameedku waxay xirayaan goobahooda jireed waxayna si dhammaystiran u socdaan dijitaalka, sidaa darteed dhammaan hawlgalladooda oo ay ku jiraan shaqaaluhu dhammaantood waxay noqon doonaan "kuwo aan jir ahayn" oo waxay ka shaqeeyaan guriga ama ka shaqeeyaan internetka.
Shaqooyinka u baahan joogitaan jireed runtii waa kuwo walaac badan marka la barbar dhigo shaqooyinka aan ahayn, waa inaad ka gudubtaa dhibka aad u aadid iyo ka imaanshaha shaqada, si aad u ilaaliso muuqaalka maamulahaaga iyo dadka kula shaqeeya, mana aha mid dabacsan. Shaqooyinka aan jirka ahayn waa kuwo aad u dabacsan, uma baahnid inaad ka gudubto walbahaarka ah inaad tagto goob shaqo oo jir ahaaneed maalin kasta, waxaadna shaqada ka heli doontaa raaxada gurigaaga ama meel kasta oo kale.
Ka shaqaynta guriga ama qabashada shaqooyin aan jidh ahayn ayaa rafcaan kuu noqon kara dhowr sababood awgood. Tani waxay ku siinaysaa xorriyad dheeraad ah hab -nololeedkaaga maalinlaha ah, fursad aad ugu shaqayso shirkado ku yaal gobol kale ama waddan kale ama aad ku fushato dano kale adiga oo weli dakhli joogto ah helaya. Sida wakiil caymis ama cod-bixiye caafimaad, tusaale ahaan, shaqooyinka qaarkood ee aan jirka ahayn waxay u baahan yihiin xirfado farsamo ama shahaadooyin gaar ah.
Xirfadaha farsamada ka sokow, qaar ka mid ah shaqooyinka aan jirka ahayn ama shaqada ka socda guriga waxay u baahan yihiin xirfado farshaxan, sida qorista ama naqshadeynta. Raadinta shaqo fog oo cusub, waxaad haysataa fursado kala duwan. Shaqsi-guri-guri ahaan, waxaad toos u toosi kartaa markasta oo aad doorato maahan sababta oo ah saacad qaylo-dhaan ayaa dhacday, laakiin waa inaad diyaar u tahay inaad bilowdo maalintaada.
Waxaad ka kici kartaa sariirta oo aad ka dhigi kartaa koob qaxwo ah, waqtigaaga ku qaad inaad akhrido wargeyska, majaladda, ama sheekada ka hor intaadan fadhiisan kombiyuutarkaaga si aad u shaqayso dhawr saacadood, oo aad u kasbato xoogaa lacag caddaan ah - oo dhan intaad weli ku jirto bajaamooyinkaaga. Haddii ay taasi adiga ku raalli tahay sii wad akhriska qoraalka blogga.
Maqaalkan, waxaan ka wada hadalnay shaqooyinka aan jir ahaaneed ee si fiican u bixiya - sidoo kale waxaa loo tixgelin karaa inay yihiin shaqooyin onlayn ah oo si fiican u bixiya - haddii aad hore ugu jirtay xoogga oo aad rabto inaad u beddesho xirfad ku habboon markaa waa inaad tixgelisaa inaad aado shaqo aan jir ahayn ama onlayn ah. Sidoo kale waxay la mid tahay dadka aan wali soo gelin xoogga shaqaalaha, waxaa laga yaabaa inaad doonaysid inaad ka fikirto inaad u aaddo barnaamij shahaado ah oo ku siin doona shaqo onlayn ah.
1 Waa maxay shaqo aan jir ahayn?
2 Sidee loo helaa shaqooyin aan jirka ahayn oo si fiican u bixiya?
3 Shaqooyinka Jidhka ah ee Sida Fiican u Bixiya
3.1 1. Naqshad Sawireed
3.2 2. Horumarinta Webka
3.3 3. Barnaamijka
3.4 4. Coder Caafimaad
3.5 5. Wakiilka Caymiska
3.6 6. Tutor Online
3.7 7. Tifaftiraha madaxa bannaan
3.9 9. Qoraa Deeqo
3.10 10. La -taliyaha Suuqgeynta Madaxa -bannaan
3.11 11. Kaaliyaha Virtual
3.12 12. Qorayaasha Farsamada
3.13 13. Transcript
Waa maxay shaqo aan jir ahayn?
Shaqada aan jirka ahayn waa shaqo aadan joogi doonin jidh ahaan, waxaad noqon doontaa shaqaale waqti-buuxa ah oo ka shaqeeya guriga, inta badan intarneedka.
Sidee loo helaa shaqooyin aan jirka ahayn oo si fiican u bixiya?
Si aad u hesho shaqooyin aan jir ahayn oo si fiican u bixiya ama shaqooyinka onlaynka ah ee si fiican u bixiya waxaad u baahan doontaa inaad la xiriirto meheradaha maxalliga ah, tus xirfaddaada, iyo inta aad siin lahayd haddii aad guriga ka shaqayso. Waxaad sidoo kale u aadi kartaa aaladaha madaxa -bannaan sida Fiverr iyo Upwork si aad u raadiso macaamiisha waxayna si fiican u bixiyaan.
Shaqooyinka Jidhka ah ee Sida Fiican u Bixiya
Halkaan waxaa ku taxan oo laga dooday shaqooyinka aan jir ahaaneed ee si fiican u bixiya kuwaas oo laga yaabo inaad ka fikirto inaad bilowdo xirfad.
1. Naqshadeeyaha Sawirka
Ahaanshaha naqshadeeye garaaf waa mid ka mid ah shaqooyinka aan jir ahaaneed ee si fiican u bixiya, waxaad go'aansan kartaa inaad iskeed u tagto oo aad adeegyadaada u fidiso shirkado kala duwan, ururo, iyo macaamiisha guud ahaan ama waxaad la shaqeyn kartaa shirkad ama macmiil gaar ah. La -shaqaynta madaxbannaanida iyo la shaqaynta dad kala duwan ayaa ku siin doona mushahar dheeraad ah, soo -gaadhis wanaagsan, iyo dhisida khibradaada la shaqaynta iyo la macaamilka dad kala duwan.
Haddii aad madaxbannaan tahay iyo haddii kaleba, midkii aad dooratay, waxaad si toos ah uga shaqayn kartaa raaxada gurigaaga ama meel kasta oo adiga kugu habboon. Si kastaba ha ahaatee, waa inay noqotaa dhexdhexaad dhexdhexaadinta firfircoon ee adiga iyo macmiilkaaga si aad si cad ugu abuuri kartaan waxay u baahan yihiin.
Maqaalka muuqaalka waxaa abuuray naqshadeeyayaasha garaafyada, labadaba qaab daabacan iyo qaab dijital ah. Waxay kaloo ka shaqeeyaan mashaariicda xayeysiinta sida wargeysyada iyo sidoo kale mashaariicda warbaahinta dhijitaalka ah sida filimka, mareegaha ama naqshadeynta appka, baakadaha alaabta, ama naqshadaha dhismaha. Shirkad, macmiil, ama agaasimaha farshaxanka ayaa siin doona naqshadeeye garaaf leh bayaan ama fikrad ay rabaan inay muuqaal ahaan matalaan. Intaas ka dib, naqshadeeye wuxuu isku daraa qoraalka, garaafyada, iyo midabka si loo abuuro walxaha muuqaalka ah.
Mushaharka celceliska: $ 18.26 saacadiiba
Tani waa mid ka mid ah shaqooyinka ugu sarreeya ee sii kordhaya ee goobta dhijitaalka ah iyo sidoo kale mid ka mid ah shaqooyinka aan jirka ahayn ee si fiican u bixiya. Ganacsiyada dhaqameedka ah ee u soo hayaamaya goobta dhijitaalka ah ayaa badiyaa abuuraya degel iyo xitaa meheradaha cusub waxay u baahan yihiin degel si ay u bixiyaan adeegyadooda iwm. Ka sokow meheradaha u abuuraya boggag internet adeegyadooda, shaqsiyaadku sidoo kale waxay leeyihiin bogag internet si ay u sii suuqgeeyaan naftooda iyo summadooda.
Si tan loo sameeyo, waxay u baahan yihiin xirfadda soo -saaraha mareegaha kaas oo barnaamijka u diyaarin doona goobta si uu ugu habboonaado dhadhanka iyo qaabka macmiilka iyo sidoo kale inuu fuliyo ujeeddada adeegyada ay rabaan inay bixiyaan.
Mushaharka celceliska: $ 71,626 sanadkiiba
Barnaamijyadu sidoo kale waa mid ka mid ah xirfadaha lagu hindisay hindisaha internetka waxayna ku lug leedahay qoritaanka koodh awood u leh codsiyada softiweerka. Isticmaalka luqadaha kombiyuutarka ee kala duwan, barnaamijka kombiyuutarka ayaa dhisi kara, tijaabin kara, hagaajin kara barnaamijyada. Barnaamij ahaan, waxaad ku takhasusi kartaa noocyo kala duwan oo codsiyo ah oo hoos yimaada horumarinta barnaamijyada moobiilka ama software ahaan adeeg ahaan.
Waxa kale oo aad mas'uul ka noqon doontaa hawlaha sida turjumidda naqshadaha barnaamijka ee xeerka, noqoshada luuqadaha kombiyuutarka, iyo tijaabinta iyo xallinta barnaamijyada. Waxaad go'aansan kartaa inaad shaqayso iskeed ama aad ku xidhnaato hal macmiil ama shirkad, mid kasta oo aad doorato inaad samayso, waxaad gebi ahaanba ka shaqayn kartaa guriga maadaama ay tahay shaqo aan jir ahayn
Mushaharka celceliska: $ 67,099 sanadkiiba
4. Coder Caafimaad
Tani waa mid ka mid ah shaqooyinka aan jir ahaaneed ee si fiican u bixiya iyo waajibaadka coder -caafimaad waxaa ka mid ah samaynta koodh -ka -qaadista iyo soo -saaridda diiwaannada bukaan -socodka. Runtii maahan shaqo adag oo runtii waa mid ka mid ah shaqooyinka xiisaha leh ee si fiican u bixiya iyo sidoo kale mid ka mid ah shaqooyinka cadaadiska hooseeya ee si fiican u bixiya.
Si aad xirfad ugu bilowdo arimahan, waxaad u baahan doontaa shahaado, diblooma, ama shahaado si kugu habboon loogu qalabeeyo xirfadaha ku filan si aad shaqada si hufan u qabato. Uma baahnid inaad ka gudubto culeyska ah inaad kasbato shahaadada bachelor -ka ee arimahan, shahaadada la -hawlgalayaashu aad bay ugu filan tahay inaad ka shaqeyso xarun daryeel caafimaad ama shirkad caymis.
Xisaabiyeyaasha caafimaadku ma samayn karaan madaxbanaanida si ka duwan kuwa kale ee liiskan ku jira, waa inay ku xirnaadaan shirkad gaar ah tanina waa sababta oo ah waxay la macaamilaan xog xasaasi ah oo quseeya caafimaadka.
Mushaharka celceliska: $ 49,204
5. Wakiilka Caymiska
Tani waa mid ka mid ah shaqooyinka aan jir ahaaneed ee si fiican u bixiya oo haddii aad ka daashay dhibka adag ee la socda qaabka shaqada caadiga ah, markaa waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ka fikirto inaad u beddesho wakiil caymis. Waajibaadka wakiilka caymiska ama dillaalku waa inay macaamiisha siiyaan qorshayaal caymis oo kala duwan kana caawiyaan xulashada siyaasadaha ku habboon shuruudahooda iyo duruufahooda.
Waxaa jira noocyo kala duwan oo wakiillada caymiska ah, waxaa jira wakiillo ku takhasusay bixinta caymiska caafimaadka iyo kuwo kale oo ku takhasusay daboolidda waxyeelada guryaha. Waxaad horumarin doontaa xiriir shaqo oo wanaagsan oo lala yeesho macaamiisha, waxaad ugu tagi doontaa wicitaan qabow iyo boostada tooska ah si aad wax uga weydiiso xaaladaha caymiskooda iyo baahiyaha mustaqbalka, oo aad u gaarsiiso baahiyaha siyaasadda.
Mushaharka celceliska: $ 55,651 sanadkiiba
6. Macallin Online ah
Macallinka tooska ah ayaa dhab ahaantii ah wax dhab ah, marka laga reebo macallimiintaada iyo macallimiintaada adeegsada aaladaha barashada internetka si ay u baraan ardayda, waxaa jira barxado loo dhisay in ardayda wax lagu baro online maadooyin badan oo maadooyin tacliin ah laga bilaabo dugsiyada hoose ilaa jaamacadaha. Mid ka mid ah aaladahaas ayaa ah cambly.com, mareegaha bixiya adeegyada waxbarashada ardayda dugsiyada hoose iyo sare ee ka kala yimid daafaha dunida ee waxbaridda luuqadda Ingiriiska.
Waxaa jira mareegaha kale oo sidan oo kale ah, qaar waxay diiradda saaraan maado gaar ah kuwa kalena waxay baraan maadooyin kala duwan. Waxaa jira barayaal intarneedka ku jira mareegahaan oo la heli karo 24/7 inay ku baraan, kaa caawiyaan inaad wax barato, dib u eegto imtixaanka iyo maadooyinka meelaynta, iyo inaad sii sharraxdo aagagga maaddada ee ardaydu dhib ku qabaan.
Si aad u noqoto macallin online -ka ah, waa inaad ku fiicnaataa maaddada aad rabto inaad barato. Waxaad noqon kartaa qalin -jabiye, shahaadada koowaad, ama kaliya qof xirfad leh ama khibrad u leh maado gaar ah. Waxaad sidoo kale u baahan doontaa kombiyuutar iyo xiriir internet oo deggan.
Mushaharka celceliska: $ 24.30 saacaddiiba
7. Tifaftiraha madaxa bannaan
Tani waa mid ka mid ah shaqooyinka aan jir ahaaneed ee si fiican u bixiya, haddii aad isha ku heyso khaladaadka maqaallada oo aad si joogto ah u cuncunto si aad u tafatirto marka aad wax akhrineyso markaa waa inaad tixgelisaa xirfadda shaqadan. Ka sokow inaad noqoto mid ka mid ah shaqooyinka aan jir ahaaneed ee si fiican u bixiya, sidoo kale waa mid ka mid ah shaqooyinka xiisaha leh ee bixiya oo waxaad ka shaqeyn kartaa guriga oo aad heli kartaa jeeg dufan bil kasta.
Tafatire madaxbannaan, kuma xirnaan doontid hal macmiil ama shirkad, waxaad heli doontaa inaad baalashaada fidiso, la kulanto noocyo kala duwan oo dad ah, sahamiso fikrado kala duwan, dhisto khibraddaada, kasbasho badan, khibrad ballaaran, oo aad wax badan sameyso lacag.
Mushaharka celceliska: $ 22.83 saacaddiiba
Blogging -ku waa mid ka mid ah shaqooyinka aan jir ahaaneed ee si fiican u bixiya mid ka mid ah faa'iidooyinka shaqadan ayaa ah inaadan runtii lahayn maamule ama macmiil sinaba. Dhammaan shaqooyinka aan jirka ahayn ee halkan ku taxan waa kuwo dabacsanaan leh, taas oo ah, inaad go'aansato saacadahaaga shaqada iyo inta aad shaqayso maalin ama saacado laakiin waxaad weli u baahan tahay inaad qof ka jawaabto laakiin balooggu ma laha taas, runtii waa dabacsanaan .
Si aad u noqoto blogger uma baahna shahaado laakiin waxaad u baahan doontaa inaad soo marto xoogaa tababar ah oo ku saabsan sida loo isticmaalo aaladda saxda ah sida saxda ah. Si kastaba ha noqotee, haddii aad qorsheyn karto, baari karto, qori karto, oo tafatiri karto maqaallada si aad dhab ahaan u xalliso dhibaato markaa waa inaad tixgelisaa inaad noqoto blogger.
Mushaharka celceliska: $ 18.83 saacaddiiba
9. Qoraa Deeqo
Qorayaasha deeqda ah waxay beeraan oo xiriir la yeeshaan deeq -bixiyeyaasha iyaga oo adeegsanaya shaqadooda. Intaa waxaa dheer, waxay abuuraan oo ilaaliyaan jadwalka warbixinta waqtiyada kama dambaysta ah iyo sidoo kale soo jeedinta qabyada ah, rafcaanka deeq -bixiyeyaasha, iyo warqadaha aqoonsiga.
Qoraalka deeqdu waa mid ka mid ah shaqooyinka aan jir ahaaneed ee si fiican u bixiya oo kuu oggolaanaya dabacsanaan badan oo dabacsanaan ah iyo inaad ka shaqayso meel kasta oo adiga kugu habboon oo waliba noqon karta gurigaaga.
Mushaharka celceliska: $ 46,577 sanadkiiba
10. La -taliyaha Suuqgeynta Madaxa -bannaan
La -talinta suuqgeynta madaxa -bannaan waa mid ka mid ah shaqooyinka aan jir ahaaneed ee si fiican u bixiya sidoo kale waa shaqo xiiso leh oo siisa jeeg dufan bil kasta oo leh culeys hoose. Iyada oo la kaashanayo maamulayaasha iyo maareeyayaasha heerka sare ah, la-taliyayaasha suuq-geynta iskood u shaqeysta waxay dejiyaan qorshe meelaynta istiraatiijiga ah.
Waxa kale oo shaqadoodu tahay inay abuuraan qorshe suuq -geyn qoran oo wax ka qabanaya dadaallada asaasiga ah waxayna ku taliyaan hababka meelaynta badeecadda ee bixin kasta oo cusub.
Mushaharka celceliska: $ 32.89 saacaddiiba
11. Kaaliyaha Virtual
Iyada oo shirkado iyo meherado kale oo kala duwan ay si buuxda u noqonayaan dijitaal, waxaa jirta baahi sare oo loo qabo kaaliyeyaasha dalwaddu. Kaaliyeyaasha dalwaddu sida magacu tilmaamayo waxay ku yaalliin dhinaca kale ee kombiyuutarka ama taleefanka casriga ah meel ka mid ah dunida oo dhan iyagoo qaadanaya wicitaannada maamule ama maamule shirkad, iyaga oo jadwalka u qabanaya shirarka, iyo guud ahaan iyaga ka caawinaya shaqadooda.
Haddii aad wax ka qaban karto, waxaad u noqon kartaa kaaliye dalwad leh in ka badan hal qof oo aad dhisto khibraddaada iyo khibradaada oo aad lacag badan ku kasbato. Asal ahaan waxaad qabataa shaqada kaaliyaha caadiga ah ama xoghaynta kaliya haddii aad sidan tahay.
Mushaharka celceliska: $ 500 - $ 2,000 bishiiba
12. Qorayaasha Farsamada
Tani waa mid ka mid ah shaqooyinka aan jir ahaaneed ee si fiican u bixiya iyo sidoo kale mid xiiso leh oo waliba la yimaada walaac hoose. Habraaca hawlgalka iyo buug -gacmeedyada waxaa qora qoraayo farsamo kuwaas oo ka soo hormariya xagga hoose. Faahfaahinta naqshadeynta farsamada iyo qoraallada imtixaanka waa la baaraa, waa la horumariyaa, waana la diiwaangeliyaa, waxaana la soo saaraa dukumentiyada elektiroonigga ah oo ay la socdaan hagaha nuqullada adag.
Mushaharka celceliska: $ 34,343 sanadkiiba
Liiskayagii ugu dambeeyay ee shaqooyinka aan jir ahaaneed ee si fiican u bixiya ayaa ah qoraal-qoris waana shaqo aad looga baahan yahay onlaynka oo kaa doonaysa inaad faylasha maqalka u beddesho qoraal. Hawshaadu waa inaad dhageysato heeso maqal ah oo aad qorto waxaad maqasho. Waxaa jira baahi loo qabo makiinada deg -degga ah, xirfadaha naxwaha hufan, iyo dulqaadka maadaama laga yaabo inaad heshid faylal leh buuq badan oo xagga dambe ah iyo lahjadaha kala duwan waqti ka waqti.
Mushaharka celceliska: $ 45,000 sanadkiiba
Kuwani waa kuwa ugu sarreeya 13 shaqooyin aan jir ahaaneed oo si fiican u bixiya waxaanan rajaynayaa inay kaa caawiyeen sidii aad go'aan uga gaari lahayd xirfad.
Shaqooyinka ugu Lacagta Badan 45 ee Kaalifoorniya
15 Shaqooyin Madadaalo ah oo Bixiya Shahaado la'aan
13 Barnaamijyada Master-ka ee ugu Fiican Kanada Shaqooyinka
Ganacsiga iyo Shaqooyinka Post blog
shaqooyin aan jir ahayn oo si fiican u bixiyashaqooyin online ah oo si fiican u bixiyaka shaqayso shaqooyinka guriga oo si fiican u bixiya
Previous Post:15 Dibloomada Dugsiga Sare ee Bilaashka ah oo Lacag La'aan ah Dadka Waaweyn
Post Next:13ka Dugsi Caafimaad Ee Ugu Sarreeya Oo Lacag La'aan Ah